Archive du 20180104
Kaominina Antananarivo Renivohitra Hamoaka gazety sy hanokatra fahilavitra
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia 03 Janoary 2018 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny Fivoriana aram-potoana voalohan’ny Filankevitra Monisipalin’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra, izay natrehan’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana. Fantatra tamin’izany fa manodidina ny 50 miliara Ariary latsaka kely ny vinavinan’ny Tetibola ampiasain’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ity taona 2018 ity.
Karama tapaka, fitantanana tsy mahomby Hihetsika ireo sendika
Mananontanina indray ny fitakian’ny mpiasam-panjakana amin’ny alalan’ny Randrambaon’ny sendika na ny SSM, indrindra taorian’ny tsirambina nanapahan’ny fanjakana ny karaman’ny mpiasa iray alina latsaka kely.
Kabary eny Iavoloha Hamoaka vahaolana ve sa fandokafan-tena fotsiny ?
Ny resaka tsy fandriampahalemana no tokony homen'ny Filoha lanja amin'ny kabary izao hataony eny amin'ny Lapan'i Iavoloha eny Iavoloha amin'ny zoma 5 janoary 2018 izao ankaotra ny resaka valan'aretina pesta izay nitranga tamina faritra maro, ny ara-tsosialim-bahoaka izay nilatsaka tsy nisy ohatr'izany koa no tena nanamarika iny taona 2017 lasa iny.
Raha tsy te hahita korontana Apetraho ny fifanarahana politika, hoy ny CRAM
Amin’izao fiandohan’ny taona 2018 dia faly miarahaba ny mpiray tanindrazana rehetra izahay, hoy ny mpikambana ao amin’ny Birao nasionalin’ny CRAM (Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar ). Mikasika ny raharaha politika, dia iaraha-mahalala fa hatao amin’ity taona 2018 ity ny fifidianana Filoham-pirenena vaovao, ka mbola manantena izahay fa hisy ny fifanarahana ara-politika satria firenena iaraha-manana i Madagasikara, mba ho tombontsoa ambonin’ny firenena sy hialana amin’ny korontana mety hitranga, hoy ny CRAM.
Hahery vaika ny rivodoza “AVA” Tsy dia rototra anefa ny fanjakana
Nivadika ho rivo-doza ilay andro atsy izay miforona ao amin’ny oseana indiana. « AVA » no anarana hiantsoana azy. Tany amin'ny 365 Km Avaratra Atsinanan'ny Sainte Marie no nisy azy omaly 03 janoary tamin'ny 04 ora hariva. Manodidina ny 75 Km/ora ny rivotra entiny ary tafiotra 105 Km/ora. Araky ny vinavina dia mbola hitombo hery izy mialohan'ny hidirany an-tanety eo avaratry Toamasina ny marainan'ny rahampitso 05 Janoary 2018.
Frantsay voatsatok’antsy Hita tao an-jaridaina ny fatiny
Vazaha Frantsay antsoina hoe G.V no nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tao an-tranony avy eo nalevin’ny mpamono azy teo an-jaridainany tany Morafeno Antsiranana. Nisy tsatok’antsy mantsy teo amin’ny tendany ary nahitana ratra ny tongony sy tao amin’ny lamosiny taorian’ny namongarana ny razana teo amin’ny toerana nandevenan’ireo tsy mataho-tody azy.
« Ballon d'or » Afrikanina 2017 Ho fantatra anio
Hivoaka anio 04 janoary any Accra, Renivohitr’i Ghana ny anaran’ny mpialalao baolina kitra Afrikanina mendrika ho an’ny taona 2017 na ilay antsoina hoe "Ballon d'or africain 2017", handimby an’ilay teratany Alzerianina Ryiad Mahrez nahazo io amboara io ny taona 2016.